Kullanka Dekedda iyo Jeenyo oo go’aamin kara hanashada horyaalka ee kooxda Banaadir ” WARBIXIN - Gool FM	twitter
Sida sharciga ah koox kaste waxa ay ciyaartaa 18 kullan mahadaama horyaalka sanadkiisii labaad ay ka qeyb galayaan 10 kooxood.
Kulamada Go’aamin doono hanashada horyaalka ee kooxda Banaadir.
1: Kullanka bari oo jimco ah dhex mari doono kooxaha Dekedda iyo Jeenyo ayaa ah ciyaarta go’aamin karta hanashada horyaalka ee kooxda Banaadir sababtoo ah in labadan kooxood ay ku kala tagaan bar baro waa tan soo gabo gabeyneysa rajada labadaas kooxood ay ka qabaan hamiga horyaalka, iyadoo Banaadir ay sidaas ugu guuleysaneyso horyaalka waa haddii ay bar baro ku kala tagaan Jeenyo iyo Dekedda.
2: Midkood haddii ay badiyaan kooxaha Jeenyo iyo Dekedda oo dhanka kale kooxda Banaadir ay bar baro ka hesho naadiga Gaadiidka ama ay ka badiso waxa ay xaqiijin doontaa hanashada horyaalka.
Sidee Banaadir ugu soo dhex muuqatay saddexdii xilli ciyaareed aan soo gudubnay
Kooxda Banaadir ayaa horyaalkii 37’aad ee 2012-2013-ka isla markaana ay ku guuleysatay kooxda Elman waxa ay ku dhameysatay kaalinta afaraad, halka horyaalka 38’aad ee 2013-2014-ka ay BSC ku qaaday 34 dhibcood.
Horyaalkii xigay ayaa ahaa kii 39’aad ee 2014-2015-ka waxaana ku guuleysatay Heegan iyadoo xilligaas kooxda Banaadir loogu qaaday hal dhibic.
Sikastaba waxaa iminka soconayo horyaalkii 40’aad ee 2015-2016-ka, iyadoo kooxda Banaadir ay talaabo u jirto hanashada horyaalka, waxaana ay noqon doontaa saddex sanno gudahiis in BSC ay labo mar hanato horyaalka, waa haddii ay ku guuleysato xilli ciyaareedkaan.